David G. Bromley bụ Prọfesọ nke Ọmụmụ Ihe Okpukpe na Sociology na School of World Studies na Virginia Commonwealth University. Mgbe m gụsịrị akwụkwọ nagraduate na Sociology na Colby College, achọrọ m akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na Sociology na Mahadum Duke, na-enweta Ph.D. na 1971. N'oge na mgbe m gụsịrị akwụkwọ na Duke, m na-eje ozi na ngalaba na Mahadum Virginia na Ngalaba Sociology na Anthropology. M laghachiri na Virginia mgbe m sonyeere ngalaba VCU na 1983 dịka oche nke Ngalaba Sociology na Anthropology. N'afọ ndị na-abịanụ, abụ m oche nke Ngalaba Nkà Mmụta Sociology, Anthropology, na Social Work na Mahadum Texas nke dị na Arlington nakwa dị ka oche nke Ngalaba Nkà Mmụta Sociology, Anthropology, na Ikpe Ikpe Ikpe na Mahadum Hartford.
N'oge mbido ọrụ m, arụrụ m ọrụ na mpaghara Urban Sociology, Political Sociology, Social Movements, Sociology of Deviance, and Criminology. Ọ bụ mmasị m na Mkparịta ụka Ndị Mmadụ na Nkwenkwe na-eduga ná nchọpụta mbụ m nwere banyere mmegharị okpukpe nke oge a, mgbe ahụkwa, n'ụzọ ka ukwuu, na Sociology of Religion. Ọrụ m ugbu a na-elekwasị anya na okpukpe na mmegharị okpukpe.
Abụ m onye edemede ma ọ bụ nchịkọta akụkọ n'elu ihe karịrị akwụkwọ iri abụọ, nke ka ukwuu n'ime akụkụ nke okpukpere chi na òtù okpukpe, na-enwe mmasị na mmegharị okpukpe nke oge a. Tụkwasị na nke ahụ, edepụtara m ọtụtụ akwụkwọ akụkọ na akwụkwọ isi na mpaghara a. Ọrụ a na-agụnye nyocha banyere ọtụtụ okpukpe ọhụrụ, dịka Unificationism and Scientology, na okwu gbasara okwu, dị ka usoro ntọghata / nke mgbagha, ịmepụta ọdịbendị nke òtù okpukpe, ihe dị iche iche na-emepụta ụdị okpukpe ọhụrụ, na njikọ dị n'etiti okpukpe na ime ihe ike. Ana m akwadebe mbipụta nke abụọ Ndi Okpukpe na Okpukpe Okpukpe: Akụkọ Nkọwa (Wiley / Blackwell, 2006), ya na Douglas Cowan dere ya. A sụgharịrị mbipụta mbụ ya n'asụsụ German, Japanese, na Czech. Ihe ọzọ m ga - eme ga - abụ akwụkwọ, Okpukpe na-agba egwu , na-achọpụta ihe nwere ike ime ma ọ bụrụ na enwere ike ịhazi ndị mmadụ ọnụ na-ekpe okpukpe.
Otu ụzọ m si chọọ ịmalite ọmụmụ banyere mmegharị okpukpe ọhụrụ site na ime ka ndị ọkà mmụta na-eduzi ọmụmụ ihe na-amụ banyere okpukpe ọhụrụ iji lelee nchọpụta abụọ na ihe ọmụmụ banyere nkà mmụta. Ọmụmaatụ, Ịkụzi Mgbanwe Ọhụụ Ọhụrụ (Oxford University Press, 2007) bu olu nke so na usoro “Teaching Religious Studies” nke Oxford. Akwụkwọ ahụ na-achọ ịmatakwu ihe okike na nkuzi banyere ngosipụta ọhụụ nke okpukperechi site na ịnye ngalaba ikike mmụta nka na klaasị iji kwalite nkuzi ha. Na Okpukpe, Okpukpe, na Ime Ihe Ike (University Cambridge University, 2001), mụ na J. Gordon Melton na-arụkọ ọrụ iji kpọkọta ndị ọkà mmụta ụwa nke na-ekwu okwu banyere ime ihe ike site n'ịmụ banyere ụfọdụ n'ime akụkọ ndị kachasị elu nke ime ihe ike nke metụtara mmegharị okpukpe ọhụrụ na njedebe Narị afọ iri abụọ. Na Okpukpe Setan (Aldine de Gruyter, 1991), mụ na James Richardson na Joel Best jikọtara ya na nzukọ nke ndị ọkà mmụta maka ịkọwa ọdịda na ọdịda nke nnukwu nsogbu ọha na eze na-emetụta ndị òtù nzuzo Setan nke na-agafe na United States na ọnụ ọgụgụ nke mba ndị ọzọ n'oge 1980.
Ihe omuma nke ozioma nke m na aru ugbua iji kwalite ihe omumu nke okpukpe bu World Religions and Spirituality Project. WRSP bụ ọrụ ntinye aka n'ịntanetị nke na-achịkọta ọtụtụ ihe onwunwe ndị bara uru nye ndị ọkà mmụta, ndị nnọchiteanya mgbasa ozi, ndị ndú okpukpe, na ụlọ ọrụ gọọmenti nwere mmasị na nzukọ okpukpe. Isi nke WRSP bụ WRSP Nkọwa nke okpukpe dị iche iche nke ndị isi ndị ọkà mmụta si gburugburu ụwa dere. WRSP na-enyekwa WRSP Forum, ndị na-akwado nzukọ na-atụle ọnụ ọgụgụ dị mkpa n'ọmụmụ banyere okpukpe; otu Akụkụ Akwụkwọ / Akwụkwọ, nke na-agbakwụnye Profaili WRSP; ngalaba nke Archive, nke nwere ndepụta nke ebe nchekwa archival dị maka ndị ọkà mmụta na saịtị ndị bụ isi; na ngalaba WRSP Videos, nke na-agbakwunye akụkụ Akwụkwọ Nsọ na ihe vidio vidio.
N'etiti ndị ọkà mmụta, m na-eje ozi dịka Onyeisi nke Òtù Maka Association nke Okpukpe na dịka onye editọ nke Akwụkwọ akụkọ maka Ọmụmụ Sayensị nke Okpukpe , nke Society bipụtara maka Ọmụmụ Sayensị Sayensị nke Okpukpe. Na 1991, m tọrọ ntọala nhazi kwa afọ, Okpukpe na Social Order , bụ nke Òtù Na-ahụ Maka Okpukpe nke Okpukpe na-akwado. E guzobere usoro ahụ iji kwado okwu abụọ na ihe ndị dị mkpa na-emetụta ihe ọmụmụ gbasara mmekọrịta okpukpe. Edere m n'usoro isiokwu ahụ, na ọtụtụ mpịakọta nke mmadụ, site na nkeji iri mbụ ya. E bipụtara akwụkwọ iri abụọ na atọ ugbu a site na Brill Publishers.
Ihe nkuzi m etinyela aka na nkwurịta okwu na nkwurịta okwu na ihe ọhụrụ na-emepụta ihe ọhụrụ. N'ọmụmụ ihe m niile, m na-ekwusi ike nyocha banyere mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke na-eme ka otu usoro dị oke mkpa. Enwere m mmasị karịsịa n'ịgwa ndị nkụzi ihe omume na ịkụziri ndị mmadụ ihe n'ụzọ na-akwalite ọmụmụba ụmụ akwụkwọ n'ime ọnọdụ a. White Racism na Black America (Schenkman / General Learning Press, 1972) mepụtara site na ọrụ nkuzi na Charles Longino na Mahadum Virginia. Ụmụ akwụkwọ gụrụ na nyochaa ihe gbasara 1,000 isiokwu na akwụkwọ iji mepụta akwụkwọ nke ha mere ka ha mara ihe gbasara ịkpa ókè agbụrụ na America. N'oge na-adịbeghị anya, amalitere m ịzụlite World Religions na Project Richmond. WRR bụ ihe ntanetị n'ịntanetị nke na-achọpụta ma gosipụta ụdị ọdịbendị dị iche iche nke okpukpe dị na mpaghara Richmond, Virginia. Ndị Mmụta na Nkà Mmụta Okpukpe na Sociology na-eduzi ọrụ ubi na akụkọ profaịlụ nke òtù okpukpe dị na Richmond. WRR ejikọtala ọtụtụ ọkwa profaịlụ nke otu na anabatara ya dị ka ndị mmekọ nke Project Pluralism na Mahadum Harvard.